Kooxda Chelsea oo halkaan sabab darteed u joojin karta soo qaadashada Sergio Aguero – Gool FM
Haaruun April 14, 2021
(London) 14 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea u muuqata inay doonayso inay la soo saxiixato xaaagan weeraryahan dhexe oo cusub, waxaana ay xiiseynaysaa labada weeraryahan ee Elring Haaland iyo Sergio Aguero.
The Blues ayaa kulammadii dhowaa sagaal beenaad ciyaarsiinaysay Kai Havertz, waxaana ay u baahan tahay inay hesho weeraryahan cusub xagaagan.
Kooxda Chelsea ayaa qarka u saaran inay markii labaad lacag badan ku qarash-garayso suuqa kala iibsiga xagaagan sanadkii labaad oo xiriir ah.
The Blues ayaa sanad ka hor waxa ay suuqa ku bixisay 250 milyan oo gini, waxaana ay ku soo qaateen xiddigo cusub oo ay ku jiraan 72 milyan oo gini oo ay kula soo wareegeen Havertz, 53 milyan oo gini oo ay ku soo qaateen Timo Werner iyo 37.5 milyan oo gini oo ay soo siisteen Hakim Ziyech.
Tababare Frank Lampard oo shaqada laga cayriyey ayaa aad u xiiseynayay inuu dib u habeyn ku sameeyo kooxda, laakiin tababaraha haatan ee Thomas Tuchel ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu sii wado qarash-gareynta suuqa kala iibsiga.
Haaland iyo Aguero ayaa ah labada weeraryahan ee suuqa xagaaga diiradda u saaran Kooxda Chelsea.
Da’yarka Kooxda Borussia Dortmund ee Haaland waa mid ka mid ah ciyaartooyda loogu doon-doonista badan yahay Adduunka sanadkaan.
Da’yarka reer Norway ayaa heshiiskiisa haatan lagu burburin karaa Adduun dhan 68 milyan oo gini, kaas oo ansax noqon doona laga bilaabo sanadka soo socda, laakiin waxa ay u badan tahay inuu noqon doono mid ka mid ah ciyaartoyda ugu qaalisan taariikhda haddii uu baxo xagaagan.
Laakiin sida ay warinayso Jariiradda Daily Star, Haaland ayaa ah bartilmaameedka koowaad ee Kooxda Chelsea.
Milkiilaha Kooxda Chelsea ee Roman Abramovich ayaa diyaar u ah inuu sameeyo wax walba oo ay ku soo qaadanayaan Weeraryahanka naadiga Dortmund.
Haddiise ay dareemaan in heshiis la la gaari karo Haaland, waxay u badan tahay inay soo gabagabeeyaan baacsigooda Aguero.
Xiddiga reer Argentine ayaa ka tagi doona Kooxda Manchester City dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana lagu heli doonaa qiimo aad u jaban.